Steel welding customized galvanized wire mesh decking - Soo Saarida Qalabka Kaydinta Qalabka Birta ee Xirfadeed,Taleex,Pallet,Raashin,Weelka Roll Etc
Hoyga » Wax soo saar » Qaybaha » Wire decking » Steel welding customized galvanized wire mesh decking
Noogu soo dir emayl
Waxyaabaha: Bir yar Q235 steel
Daaweynta dusha sare: Galvanized/hot dip galvanized
Aagga Codsiga Used in rack
Awoodda Loading 50- 1000kg load capacity
Calaamadee Customized or OEM support Guarantee period:5 years warranty
Geeddi-socodka iyo Xakamaynta Tayada:
HOOS KA DHAGAYSO:
Ka weyn 10 waayo-aragnimo sanado ah arimahan.
Khibrad R&Kooxda D waxay taageertaa sawirro xirfadeed iyadoo la raacayo isticmaalkaaga.
Si toos ah qiimaha warshad leh tayo sare.
Wadashaqeynta shirkad caan ah sanado badan.
Gudubtay ISO9001:2008 nidaamka tayada ,SGS,HADAAN
S: Aaway warshaddaadu? Sideen ku booqan karaa halkaas?
A: Warshaddeenna waxay ku taalaa FoshanCity, Gobolka Guangdong, Shiinaha, u dhaw Guangzhou Waad toos u duuli kartaa garoonka diyaaradaha Guangzhou. Si diirran ayaa lagugu soo dhoweynayaa inaad na soo booqato mar alla marka aad diyaar tahay!
S: Waa maxay alaabta ceyriin ee alaabadaadu?
A: Guud ahaan, Waxyaabaha cayriin ee koodhka birta waa Q235. Birta kale ayaa waliba loo heli karaa macaamiisha’ shuruudaha.
S: Waa maxay muddada lacag bixinta?
A: Guud ahaan, 35% Bixinta lacag bixinta iyo isu-dheelitirka kahor intaan la dhoofin.
S: Waa maxay wakhtiga dhalmada?
A: Waxay kuxirantahay tirada dalabka iyo noocyada wax soo saarka. Guud ahaan, gudahood 20 maalmaha shaqada, Tirada amarrada caadiga ah..
S: Dekeddee ayaa loo isticmaali doonaa sidii deked dejisa?
A: Dekedda Guangzhou nansha
S: Anigacaadadiiized la heli karo?
—Haa, ku dhawaad ​​sheyga oo dhan waa la dejin karaa.
S: Miyaad naqshadeyn kartaa oo aad sameyn kartaa sawir ?
—Haa, waxaan sameyneynaa naqshadeyn ku habboon oo sawiro leh sida ku xusan isticmaalkaaga waxaanna ka codsaneynaa xaqiijin ka hor amarka.
S: Waa maxay faa iidadaadu?
A: 1. Warranty: —3~ 10 sano damaanad haddii taasi dhacdo
Maareyn habboon, si sax ah u maammuul forklift inta lagu xidhayo / xirmayo
B xad-dhaafida waa mamnuuc
C Codsi deegaan --indoor, xaalad qalalan oo aan qoyaan lahayn, ha la xiriirin wax walxo kiimiko ah oo dumaya (loogu talagay zinc steel iyo waxyaabaha budada ka sameysan, xaddidneyn kuleylka kulul ee kulul).
2. Qiimaha Warshadaha: Suuqa tooska ah ee iibka qiimaha.
3. Waxaan qaadnaa mas'uuliyad buuxda wixii cilladaha soo saarista ah, ayaa kuu noqon doona ama kuu celin doona badeecado wanaagsan oo adiga kuu habboon
Qalabka cusub ee Birta-Yugu